तपाईंको य्स्तो ५ गल्ती, आँखाका लागि हुन सक्छ खतरा ??? – News Nepali Dainik
तपाईंको य्स्तो ५ गल्ती, आँखाका लागि हुन सक्छ खतरा ???
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ समय: १९:२९:५०
आँखा हाम्रो शरीरको संवेदनशिल र महत्वपूर्ण अंग हो । यसकारण आँखाको हेरचाहमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । थोरै लापरवाहीले पनि आँखालाई ठूलो हानी पुर्याउन सक्छ । हामीले दैनिक रुपमा गर्ने क्रियाकलापहरुले हाम्रो आँखालाई कति हानी पुर्याउँछ, हेरौं ५ वटा कारणहरु ।
अध्ययन गर्दा प्रयाप्त रुपमा उज्यालो नहुँदा पनि आँखाको विरामी हुने जोखिम हुन्छ । थोरै उज्यालोमा पढ्दा आँखाका लागि हानिकारक हुन्छ । उज्यालो कम हुँदा नजिक र टाढाको दृष्टिमा फरक पर्छ । नजिक भएका वस्तुमा आँखा बढी फोकस हुन्छ, यो आँखाको लागि हानिकारक हुन्छ ।
आजभोली मानिसहरु पढ्नका लागि मोबाइल, ल्यापटप अथवा ई–रिडर प्रयोग गर्छन् । तर इलेक्ट्रोनिक्स स्क्रीनका ग्याजेट्सहरु आँखाका लागि फाइदाजनक छैनन् । चिकित्सकका अनुसार इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन, कम्प्युटर, ट्याबलेट्स, स्मार्टफोनको लाइटले सुर्यको परावैजनी किरणले जस्तै हानी पुर्याउँछ । यसले आँखामा मोतियाबिन्दु समेत हुन सक्छ
लामो समय कम्प्युटरमा काम गर्दा
लगातार कम्प्युटरमा काम गर्दा, मोबाइल चलाउँदा आँखाका लागि असहजता महसुस हुन्छ । मानिसले औसतमा आँखा १२–१५ पटक झिम्काउने गर्छन तर कम्प्युटरमा काम गर्दा आँखा केवल ४–५ पटक मात्र आँखा झिम्काउने गर्छन् । धेरै लामो समय काम गर्दा ड्राई आई सिन्ड्रोम, आँखा चिलाउने जस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
कम्प्युटरमा लगातार काम गर्दा आँखाबाट पानी निस्कने समस्या हुन्छ, आँखा नझिम्काउँदा ल्युब्रिकेन्ट राम्रोसँग आँखा फैलन सक्दैन जसले आँखा विभिन्न समस्याहरु देखिन्छ ।
लामो समय मोबाइल चलाउँदा
मोबाइल, कम्प्युटरमा आँखाले सीधा हेर्दा सबैभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ । कम्प्युटर,मोबाइल र आँखाको दुरी कम हुन्छ, आँखाको मुभमेन्ट कम हुन्छ । आँखा लामो समयसम्म एउटै मुभमेन्टमा फोकस हुन्छ । मोबाइल र कम्प्युटर अत्याधिक प्रयोग गर्ने मानिसमा ड्राई आई सिन्ड्रोम देखिन्छ ।
धूम्रपान आँखाका लागि हानिकारक
धूम्रपानले मानिसको आँखालाई समेत असर पुर्याउँछ । चुरोटमा करिव ४००० केमिकल्स हुन्छन्, जो शरीर भित्र गएर अन्य अंगसँगसँगै आँखामा पनि हानी पुर्याउँछन् । धेरै चुरोट पिउँदा आँखामा रातो दाग हुनुका साथै आँखा सम्बन्धी अन्य रोगहरु पनि लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
Last Updated on: February 5th, 2021 at 7:29 pm